Alteryx: Usoro nyocha nke akpaaka (APA) Platform | Martech Zone
Alteryx: Usoro nyocha nke akpaaka (APA) Platform
Mgbe ụlọ ọrụ m na-enyere aka na draịva njem mgbanwe dijitalụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, anyị na-elekwasị anya na isi akụkụ 3 - ndị mmadụ, usoro, na nyiwe. Mgbe ahụ, anyị mepụtara ọhụụ na ụzọ iji nyere ụlọ ọrụ ahụ aka ịmepụta ma rụọ ọrụ nke ọma yana gbanwee ahụmịhe ndị ahịa na mpụga.
Ọ bụ nkwekọrịta siri ike nke nwere ike iwe ọtụtụ ọnwa, na-etinye ọtụtụ nzukọ na onye ndu na nyocha miri emi nke data, nyiwe, na njikọta nke azụmahịa ahụ dabere. Isi ihe kpatara ya bụ na a na-agbanye data n'etiti mpaghara atọ.
Kedu ihe nyocha nyocha akpaaka (ACA)?
Usoro nyocha akpaaka n'egosi ntozu nke data na akụrụngwa nchịkọta, nke jikọtara ahịa dị iche iche gụnyere nchịkọta, ọgụgụ isi azụmaahịa, sayensị data, na ngwa mmụta ngwa igwe. APA na - agbakọta ogidi isi atọ nke akpaaka na mgbanwe dijitalụ iji mee ka ochichi onye kwuo uche ya data na nchịkọta, akpaaka nke usoro azụmaahịa, Na ndi mmadu n'ihi na ngwa ngwa merie na ihe ntụgharị.
Usoro nyocha akpaaka (APA) bụ teknụzụ na-enye onye ọ bụla nọ na nzukọ gị ohere ịkekọrịta data, rụọ ọrụ na-agwụ ike na usoro mgbagwoju anya, ma gbanwee data na nsonaazụ. Site na nyocha akpaaka nyocha, onye ọ bụla nwere ike ịmeghe amụma na ịkọwapụta nke na-eme ngwa ngwa na-enweta ngwa ngwa na ngwa ngwa ROI.
Alteryx, Kedu ihe bụ APA?
Alteryx bụ ikpo okwu jikọrọ ọnụ maka nyocha, sayensị data, ngwa ọrụ akpaaka, autoML na AI:
Ntinye akụrụngwa akpaghị aka - 80 + nke gbakwunyere agbakwunyere data sitere na Amazon ruo Oracle ruo Salesforce. Jide n'aka na jikọọ ọnụ ọgụgụ na-enweghị njedebe nke isi mmalite ndị ọzọ. Ọ bụrụ n’inwere ike ịnweta data ahụ, ịnwere ike iweta ya n’ime Alteryx ma were oge dị ukwuu nyocha na obere oge nyocha.
Ogo na Nkwadebe data - Nyochaa ma jikọọ data sitere na ọdụ data dị n’elu-igwe, igwe ojii, na nnukwu ma ọ bụ obere data data na ndị ọzọ. Ghichaa, kwadebe, ma jikọta data site na isi mmalite dị iche iche ma ọ bụ na-enweghị ihe nchọpụta pụrụ iche iji nyefee profaịlụ dị n'otu.
Enweta data na nghọta - Mechie ike igwe ojii na ngwaọrụ dị n'ime nchekwa data nke na-eme nnukwu data ka ọ bụrụ nghọta buru ibu. Gaa na data gbasara igwe mmadụ na omume ịzụ ahịa iji mepụta echiche miri emi ma ghọta ndị ahịa. Mee ka nyocha gị dịkwuo mma, eserese adreesị, ike ịkwọ ụgbọala, yana nghọta miri emi nke ndị ahịa gị na ebe gị - n'ihi na ihe niile na-eme ebe.
Science Science na Mkpebi - Jiri usoro nyocha otu gị rụọ ọrụ site na iji usoro ntụpụ aka wee nyere aka ịmebe ihe iji wulite ụdị na-enweghị nzuzo ma ọ bụ ọkachamara nyocha. Nweta nghọta na azịza ka mma site na iji data maka usoro nyocha dị mgbagwoju anya, site na nyocha mmetụta na data a na-edozighị ahazi iji wuo ụdị ụdị R siri ike na-enweghị usoro nzuzo. Mee ka akwa ọgụgụ isi rụọ ọrụ na nyocha dị elu, dị ka mmụta igwe, iji nye echiche ndị na-ele anya n'ihu.
Akpaaka Nsonaazụ - Mee ka ndị ọzọ nwee ike ịhazi nyocha ọ bụla ma jiri ngwa nyocha nyocha mee mkpebi. Kekọrịta n'ụdị dị iche iche dịka ịdeghachi na nchekwa data ma ọ bụ bot ma ọ bụ na-agbatị mpempe akwụkwọ ma ọ bụ akụkọ dị mfe iji. Mee otu ugboro ma rụọ ọrụ ruo mgbe ebighị ebi. Na-aza azịza nke ọma ma soro ndị nwere oke kerịta ya ka ha nwee ike ịme ihe, iji anya nke uche hụpụta ihe, ma ọ bụ mepụta mpempe akwụkwọ dị arọ na Alteryx. Mee ka ihe ndi mmadu puta ma mee ka ndi mmadu nwere ike ime ka ndi mmadu nwee ike ime ngwa ngwa, ihe di nma.
Ndị ọrụ na-amalite n'okwu azụmahịa ma nwee ike ịmepụta ngwa ngwa nyocha, sayensị data, na nsonaazụ akpaaka na-arụ ọrụ, na-enweghị mkpa ọkachamara ọ bụla.
Gbanwe Top-Line Uto
Na-agbanwe ala-akara ga-alaghachi
Formgbanwe Agbanwe arụmọrụ
Psgbalite Ndị Ọrụ Gị
Mmetụta utịp nke APA bụ nsonaazụ azụmaahịa ngwa ngwa, usoro azụmaahịa na-akpaghị aka n'ụzọ zuru oke, yana ike ịchụpụ ngwa ngwa ma nwee mmetụta.
Alteryx mmekọrịta mmekọrịta Ọnwụnwa ọnwụnwa Alteryx n'efu
Adobe Ahụmahụ Platform na Alteryx
Usoro nhazi akpaaka Alteryx Analytics na Adobe Experience Platform na-eme ka ndị otu nwee ike ịhazi nyocha azụmaahịa iji nweta nsonaazụ nyocha ngwa ngwa. Alteryx APA Platform na-enye azịza dị mfe, ịdọrọ na dobe nke na-eme ka ịnweta data na nyocha dị mfe, ma na-enye ndị ahịa ohere ikpokọta data sitere na isi mmalite data Adobe Experience Cloud, gụnyere Marketo Engage na Adobe Analytics, na nkeji iji mepụta nghọta dị oke mkpa maka nyocha na amụma gbasara amụma.
Tags: Adobe nchịkọtaAdobe mgbanweAdobe ahụmahụ n'elu ikpo okwuaialteryxAlteryx akụkụUsoro nyocha akpaakaanomgbanwe ntanetịngwa igweMarketo tinye akanchịkọta amụma
Soundtrap: Mepụta Onye Ọbịa Gị-Na-akwagharị Podcast na Igwe ojii